Otu esi etinye azụ azụ na ebe nchekwa nnwale na Debian 11 - LinuxCapable
Otu esi arụnye Backports & Ebe nchekwa nnwale na Debian 11
August 28, 2021 by Jọshụa James
Tinye ebe nchekwa Backport na Debian 11
Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite na Backports
Wụnye ma ọ bụ kwalite ngwugwu sitere na Debian Backports
Kwalite ngwugwu niile site na ọdụ ụgbọ mmiri
Nhọrọ - Tinye ebe nchekwa nnwale Debian
Kwalite ngwugwu niile site na nnwale
Jiri kernel kacha ọhụrụ sitere na nnwale Debian
A maara Debian n'etiti obodo Linux maka ọkọlọtọ ọla edo ya ka ọ kwụsie ike, na ihe ndọghachi azụ nwere ike ịbụ na ngwugwu ahụ, ọkachasị mgbe afọ mwepụta Debian ọhụrụ bụ na ha na-anọkarị n'azụ ihe dị ugbu a ka ha na-enweta naanị nchekwa na ahụhụ. mmelite ka ngwungwu kwụsie ike.
Ugbu a maka ọtụtụ gburugburu, nke a bụ ihe anabatara kpamkpam. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ nwere ike bụrụ ihe na-akụda mmụọ maka ndị ọrụ chọrọ ụfọdụ ngwugwu ka emelite ha ka ha jiri njirimara ma ọ bụ dozie ahụhụ na-adịghị njọ ma ọ bụ nchekwa metụtara. Otú ọ dị, ihe dị ukwuu banyere Linux na iji ebe nchekwa bụ na ị nwere ike iji ihe a maara dị ka azụ azụ ma ọ bụ ebe nchekwa nnwale, nke bụ ngwugwu ewepụtara na ntọhapụ Debian na-esote, nke bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a na-enyocha ule ma gbanwee maka ojiji na ụlọ Debian.
Nkuzi na-esonụ ga-akụziri gị ka esi eji backports iji wụnye ma ọ bụ kwalite otu ngwugwu ma ọ bụ kwalite usoro gị dum na-ekpuchi anya. Dị ka ego, nkuzi ahụ gụnyere nhọrọ nnwale maka ndị hụrụ n'anya ibi na nsọtụ.
Nzọụkwụ mbụ iji wụnye ngwugwu site na ebe nchekwa backports bụ nke mbụ ịgbakwunye ha na isi mmalite.list faịlụ. Iji mee nke a, mepee ọdụ Debian gị wee mebie iwu a:
Gaa na njedebe nke faịlụ a họọrọ ma gbakwunye ahịrị ndị a:
Chekwaa faịlụ nhazi (Ctrl+O), wee pụọ na (CTRL+X).
Iji mgbanwe ọhụrụ emelite ndepụta nchekwa, mee nke ahụ iwu mmelite dabara adaba:
Nke a ga-eme ka cache ebe nchekwa nweta ume site na ngwungwu azụ azụ dị maka iji na wụnye ngwugwu ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Iji backports na Debian dị nnọọ mfe; ị nwere ike ịwụnye ngwugwu ozugbo site na azụ azụ (99.99% nke oge a tụrụ aro) ma ọ bụ melite sistemụ gị niile iji jiri ngwugwu azụ azụ kacha ọhụrụ (anaghị atụ aro ya).
Iji wụnye ngwugwu kpọmkwem site na ebe nchekwa Debian backports, syntax ga-adị ka ịwụnye ngwugwu nkịtị ma e wezụga ịgbakwunye. -t ọkọlọtọ na ịkọwa aha bullseye-azụ azụ.
Ihe atụ dị ndụ na-etinye Cockpit:
Ngwungwu Cockpit nkịtị sitere na ebe nchekwa Debian 11 bụ ụdị wu 239; na backports, anyị nwere ugbu a ọtụtụ ihe emelitere version na Cockpit ngwugwu na ụdị wu 251.
A naghị atụ aro nhọrọ nke abụọ n'ihi na ọ ka mma ịmara ọdụ ụgbọ mmiri ị na-etinye. Iji kwalite ngwungwu niile, mee iwu na-esonụ na njedebe gị:
Iji gaa n'ihu na mmelite, ụdị Y, mgbe ahụ pịa igodo tinye ọ bụrụ na-amasị gị wụnye ngwugwu azụ azụ ndị a.
Maka ndị na-ahụ n'anya ibi na nsọtụ oche ha, ị nwere ike ịwụnye ebe nchekwa nnwale, nke nwere ike nweta mmelite kachasị na-agba ọbara site na Debian; Otú ọ dị, e kwesịghị iji nke a mee ihe ọ gwụla ma ị nọ na ule VM na-atụfu ma ọ bụ onye mmepụta / sysadmin nwere nzube chọrọ ngwugwu site na ebe nchekwa a ma ọ bụ onye ọrụ ike dị elu nke nwere ike ijikwa nsogbu ọ bụla na-ezighị ezi kemgbe mgbanwe nke mgbanwe. incompatibility bụ ukwuu elu.
Mepee gị ọzọ isi mmalite.list faịlụ nhazi, ma tinye ihe ndị a na ala n'okpuru ihe ị gbakwunyere na mbụ:
Nke a ga-eweghachite cache ebe nchekwa ahụ site na ngwungwu nnwale dị maka iji na wụnye ngwugwu ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Dị ka n'elu, na nkuzi na-elekwasị anya na iji backport iwu iji wụnye ngwugwu, ihe niile ị ga-eme bụ dochie backports na nnwale.
Cheta, kpachara anya iji ihe ọ bụla sitere na ebe nchekwa nnwale, ọkachasị na sava mmepụta ndụ ma ọ bụ gburugburu ebe obibi dị ka ịgba ọsọ WordPress CMS ma ọ bụ ihe yiri ya.
Dị ka otu ụkpụrụ ahụ kọwara maka azụ azụ, ị nwere ike kwalite ngwugwu niile n'otu oge. A naghị atụ aro nke a ma ọlị n'ihi na ọ na-eme ka ị kwalite na sistemụ Debian nnwale anaghị akwụsi ike. Otú ọ dị, maka ndị na-adịghị eme ihere:
Maka ndị ọrụ na-ahụ n'anya ibi na nsọtụ, dị ka nkuzi ahụ kọwara n'elu, ugbu a, n'oge ederede, Debian Bullseye na-eji Linux kernel 5.10.x, ugbu a na ebe nchekwa Linux Kernel 5.13.x dị ugbu a. Maka ndị nwere mmasị, ị nwere ike ịkwalite dịka ndị a:
Dị ka ọ dị na nkwalite kernel ọ bụla, ị ga-achọ ịmalitegharị sistemụ Linux gị ka kernel ọhụrụ dị ndụ:
Ozugbo ịmechara ịmalitegharị sistemụ arụmọrụ gị, nyochaa kernel Linux ọhụrụ gị dị ka ndị a:
Dị ka ị na-ahụ, ị ​​na-eji Linux Kernel 5.13.0 ugbu a ma wuo ụdị 5.13.12.1 karịsịa. O yikarịrị ka kernel a anaghị akwụsi ike ma ekwesịrị iji ya ma ọ bụrụ na ị nwere ngwaike kachasị ọhụrụ chọrọ kernel emelitere maka nkwado ngwaike. Gbaa mbọ hụ na ị na-elele azụ maka mmelite kernel, n'ihi na nke a ga-agbanwe mgbe niile.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ma wụnye ma ọ bụ kwalite ngwungwu site na ebe nchekwa Debian backports nwere ihe ọmụma ọzọ nke iji ebe nchekwa nnwale nke ọnụ na-agba ọbara. N'ozuzu, ebe nchekwa ndị a nwere ike ịdị mma maka imelite ya na ngwugwu kachasị ọhụrụ nwere ọtụtụ nkwalite karịa ihe dị na ebe nchekwa Debian 11, karịsịa n'oge dị ka Debian stables nwere ike ịdịru afọ na-enweghị mgbanwe dị ukwuu. Otú ọ dị, na ihe ndị dị mma, ị ghaghị ịkpachara anya; ị nwere ike imebi sistemụ gị ngwa ngwa ma, ka mma, webata okwu nchekwa ma ọ bụrụ na ị kpachapụghị anya na, nke ka mkpa, na-agbasi mbọ ike na iji ngwugwu ugbu a na iji n'ọdịnihu.
Otu esi etinye LEMP Stack na Debian 11 - Nginx MariaDB PHP